काठमाडाैं, १२ माघ । समयमै मानसिक रोगको उपचार भएमा सार्थक जीवन विताउनसक्ने मनोविद्हरुको जनाएका छन् । बङ्गलादेशको राजशाहीमा भएको ‘विकासात्मक अपाङ्गता’ सम्बन्धी सातौँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा मनोविद्ले सो कुरा औल्याउँदै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धीको विषयलाई...
तरकारीकाे विषादी भिनेगरबाट यसरी हटाउने
काठमाडाैं । सागसब्जी रोप्ने, उमार्ने, भण्डारण गर्ने क्रममा रासयनिक मल, किरा मार्न किटनासक औषधि प्रयोग गरिएकाे हुन्छ । हामीले केही खानेकुरालाई भान्सामा नै शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ । भलै यो विधीबाट पूर्णत जैविक खानेकुरा प्राप्त...
काठमाडौँ, ८ माघ । काठमाडौँं नेचुरोपेथी अस्पताल बसन्धुराले गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को काठमाडौंको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
यसकारण बालबालिकाको प्रशंसा गर्नुहोस् !
काठमाडौँ । तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नुभएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको विषयमा ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुले गरेका गतिविधिबारे गहिरिएर सोच्नुभएको छ ? यदि छैन भने उनीहरुका क्रियाकलापबारे आजैदेखि ख्याल गर्ने बानी बसाल्नुहोस्...
के छ सखरखण्ड खानुका फाइदा ?
काठमाडौं । नेपाली समाजमा माघेसङ्क्रान्तिको दिन सखरखण्ड खाने चलन छ । माघेसङ्क्रान्तिकै दिनमात्र नभई अन्य दिनमा सखरखण्ड खानु फाइदाजनक मानिन्छ । सखरखण्ड स्वादको लागि मात्र नभई स्वास्थ्यको लागी पनि फाइदाजनक छ । यसको सेबनले...
स्वस्थ दूधले बच्चाहरुमा मोटोपनको जोखिम कम गर्ने
काठमाडौँ । स्वस्थ दूध पिउने बच्चाहरु बोसोयुक्त अर्थात चिल्लो पदार्थ बढी भएको दूध पिउनेहरूको तुलनामा बढी वजन अर्थात मोटोपनको संभावना कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले “होल मिल्क”...
साकाहारी खानाका यति धेरै फाइदा
काठमाडाैं । मासुमा पाइने तत्वका कारण मासु चाँडै पच्दैन । जबकि शाकाहारी खाना चाँडै पच्छ । शाकाहारी भोजनमा रोगसंग लड्ने क्षमता हुन्छ । यसले मानिसलाई बुद्धिमान बनाउँछ । तरकारीमा भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, एमिनो एसिडजस्ता अति...
पिनासमुक्त हुन जान्नै पर्ने डा. यञ्जन गैह्रेका टिप्स
पिनास पिनास भन्नाले नाकको भित्री भागमा रहेका खाली ठाउँमा अवरोध भएर श्वासप्रश्वासमा बाधा पुर्याउने एक किसिमको रोग हो । जसलाई साइनोसाइटिस पनि भनिन्छ । साइनोसाइटिस साइनस (sinus) हरुको इन्फ्लामेसन (Inflammation) हो । साइनस भन्नाले...
यस्ता छन् मुलाले दिने अनेकाै फाइदा
काठमाडाैं । क्यान्सरदेखि गिजाबाट रगत आउने लगायत थुप्रै राेगकाे समस्या समाधान र मुलाले औंषधिकाे काम गर्छ । क्यान्सर जस्ता असाध्य रोगसँग लड्नु असम्भव मानिन्छ। मूलाको नियमित सेवनले क्यान्सरको जोखिम घटाउने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्...
बदामका यस्ता छन् फाइफा
काठमाडौं । नेपाली समाजमा अलमण्डलाई मधेसी बदामको नामले चिनिन्छ । यो मध्यम रुखमा फल्ने फल हो । मधेसी बदामलाई चिनियँ बदाम पनि भनिन्छ । मधेसी बदाममा फाइबरको मात्रा बढी हुनुका साथै भिटामिन ई, म्याग्नेसियम,...
मधुमेहका राेगीले खाने कुरा
काठमाडाैं । रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुने भएकाले मधुमेहका रोगीले जे पायो त्यही खानेकुरा खान हुँदैन । यो एक दीर्घ रोग भएकाले रोगीले खाना खाँदा निक्कै होस पुर्‍याएर खानुपर्छ । यसका साथै यस्ता रोगीले...
गुणकारी वनस्पती तुलसी, यस्ता छन् फाइदा
काठमाडाैं । जाडोयाममा धेरै मानिसलाई स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहेका हुन्छन् । आफ्नै घरवरीपरि भएका विभिन्न किसिमका वनस्पतीबाट पनि त्यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यस्तै विशेष गुण...
कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने बाचा पूरा भएका हुने थिए (प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ)
उपत्यकामात्रै ६ सय बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण
शनिबार कुन जिल्लामा कति थपिए कोरोना संक्रमित ?
१७९ आईसीयू र ३५ जना कोरोना संक्रमित भेन्टिलेटरमा
थप ११ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ४ सय नाघ्यो
काठमाडौँमा उपत्यकामा थपिए ७११ कोरोना संक्रमित, ५ को मृत्यु
पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गर्ने २ जना पक्राउ